A Semiconductor diode. ngesisekelo electronics
Nge zonke ezihlukahlukene isici base yesimanje electronic kumelwe singakhohlwa ukuthi kusekelwe ezintweni silula, omunye okuyinto diode Semiconductor.
Kufanele kuqashelwe ngokushesha ukuthi unganakile ke liyisici elula. Empeleni, ukusebenzisa kwayo ivumela ukuxazulula ezihlukahlukene imisebenzi emkhakheni electronics kanye nobunjiniyela bukagesi. Ubuchwepheshe ukwakhiwa amadivayisi enjalo akunzima ikakhulukazi.
I diode siqukethe ezimbili ezahlukene conductivity uhlobo izinto ngokuthi izizinda n-conductivity p-conductivity. Uma sicabanga isimiso ukusebenza diode Semiconductor, isidingo ukuya izinto ezifana PN okuhlangana kuyo, electron ekushayweni, okusheshayo, imiphumela efanayo ngokomzimba. Ngakho-ke, kokushiya ingxoxo yale mibuzo ngoba Kwesinye isenzakalo, zisebenzisa ukuqhathanisa. Qhathanisa diode Semiconductor kungenzeka valve. Ngenxa isakhiwo ayo, ehlanganisa ezimbili ezihlukene conductivity uhlobo lwento e thuluzi kukhona conductivity sohlangothi olulodwa, okusho ukuthi i kagesi ngokusebenzisa kungaba ageleze kuphela kwelinye direction. Kungokufanayo kwenzeka uma usebenzisa valve - emoyeni noma emanzini izophela kuphela kwelinye direction. Isibonelo - ibhayisikili ikhamera: emoyeni ageleza, futhi emuva - akukho.
Kunengqondo umphumela silula - eyodwa conductivity, kodwa unikeza omningi amathuba ukuyisebenzisa kanjani ngokoqobo. Ikakhulukazi, i-diode Semiconductor wenza AC ukuze DC ukuguqulwa. Kukhona isigaba sonke imikhiqizo ngokuthi rectifier diodes.
Basebenza njengomfula valve. Lapho polarity of the voltage isetshenziswa umkhiqizo sifana edingekayo, okuwukuthi, lapho voltage plus lisetshenzisiwe plus idivayisi iphinde lokususa ukuba lokususa ke ngokusebenzisa kagesi, uma kungenjalo, akwenzeki lutho.
Kuyinto ngenxa umphumela echazwe AC voltage is iguqulwe ibe umuntu unomphela. Isifunda okokufaka yanikezwa voltage kushintshana, kodwa voltage yonkana Semiconductor sihamba kuphela polarity lesifanele. Ngenxa yalokho, sithola lo voltage okukhiphayo of polarity eyodwa kuphela, kuyilapho Ukwedlula, okusho ezingafani kwawo namandla awo.
Lokhu akuyona isicelo kuphela kumadivayisi Semiconductor. Ngesikhathi kuhlangana PN, okuyinto ngesisekelo diode, zikhona nezinye izici zayo, eziningi zazo zichazwe ngokukhethekile emkhakheni wezezimboni yayo. Lezi zimo zokuma kukhona isisekelo ezinye, ezihluke kakhulu kunokuba izigaba zedivayisi. Lokhu zener diodes, high-imvamisa futhi diodes pulsed, varicap, photodiodes, LED, njll Kodwa wonke amalungu omndeni zisekelwe izakhiwo kwalapho PN.
Nokho, kukhona ikilasi amadivayisi, ngokuthi "Semiconductor Gunn diode", ongakaphathelani kumiswa inguquko esinjalo. Umsebenzi wabo isekelwe okuthiwa Gunn umphumela. Sibangelwa isethi eziyinkimbinkimbi imihlola okwenzeka Semiconductor chip ngaphansi imithelela ezithile zangaphandle. Ngenxa yalokho lezi zinqubo wamanje egeleza ngokusebenzisa crystal eshintsha oscillations yayo zenzeka. Kodwa esizukulwaneni kanye nokusetshenziswa yabo kumadivayisi enjalo. Basuke okuvame ukusetshenziswa microwave ubuchwepheshe deku kunyakaza.
Diodes ziyingxenye ebalulekile ye isisetjenziswa se-elektroniki. Zisetshenziswa ekwehlukaniseni kanye voltage ukuguqulwa, njengoba sinjalo, gqwa umsindo; kulula uhlu amacala lapho azisetshenziswa. Kubo, kukhona izinhlobo ezahlukene izindlu, eyenzelwe ezihlukahlukene imisinga kanye voltages futhi efakwe kokubili izifunda input bese okukhipha e amadivayisi ayi- elekhthroniki. Diode - kungcono cishe omunye amadivayisi Semiconductor ezivamile.
Manje uyazi ukuthi diode Semiconductor, futhi lokho ongakhetha ukusetshenziswa kwakhona.
"Mitochondrial Eva" futhi "u-Adamu zofuzo" - okhokho baso uhlanga lwesintu
Elena Pavlyuchenko - umfazi Sergeya Mavrodi: Biography nesithombe
Amazing ubunjalo Borneo
Tattoo anamagama yezingane: isiko ukuthintwa noma into yesikhashana?
Skirt yegridi - thunga ngokwakho
Ukuqedela - indlela yokufihla kahle izindawo eziyinkinga.
Engeziwe amalahle gumbi umgibeli: idivayisi uxhumano
Negesi jet: ukuthi isebenza kanjani, lapho yasungulwa? Isibani Street ne Jets ezimbili igesi
Indlela yokwenza isembozo sencwadi ngezandla zakho? Indlela yokwenza isembozo se-disc, i-notebook noma idayari?